विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य हुँदै, नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व चीनको हातमा जाँदै-Nepali online news portal
विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य हुँदै, नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व चीनको हातमा जाँदै
पछिल्लो समय अमेरिकी नेतृत्वकाे एकपक्षीय नीति तथा कदमका कारण वर्तमान विश्व व्यवस्थाले परिवर्तनको माग गरेको छ ।
विद्यमान अमेरिका केन्द्रित विश्वव्यवस्था पतनोन्मुख छ । विश्वमा प्रमुख शक्ति राष्ट्रले चाल्ने कदमले भावी भूराजनीति निर्धारण गर्ने स्थिति छ । पछिल्लो समय अमेरिकी नेतृत्वका एकपक्षीय नीति तथा कदमका कारण वर्तमान विश्व व्यवस्थाले परिवर्तनको माग गरेको छ ।
यस्तो स्थितिमा अरू देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी नीतिविरुद्ध लड्न चीन र रुस एक होलान् ? इरान र टर्की, चीन र रुसको पक्षमा उभिएलान् ? युरोपले कस्तो कदम चाल्ला ? अनि भारत कता मोडिएला भन्ने प्रश्नको उत्तरले भावी विश्व व्यवस्थाको बाटो निर्धारण गर्नेछ ।
विश्व व्यवस्थामा आएका अधिकांश जटिलताको मूल जड अमेरिकी घरेलु राजनीति हो । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा यसको मुख्य दोषी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् । अमेरिका र सोभियत युनियनबीचको शीतयुद्धमा अमेरिका विजयी भएको भन्ने गलत धारणाबाट विद्यमान विश्व व्यवस्था जन्मिएको होे ।
आफू विजयी भएको भन्ने कथित उन्मादका कारण अमेरिकाले विश्वलाई आफूकेन्द्रित राजनीतिमा बाँध्ने प्रयास गर्‍यो । विश्वमाथि प्रभाव र नियन्त्रण बनाउन विभिन्न उपाय अमेरिकाले अँगाल्यो पनि । यसका लागि डलरलाई विश्व वित्तीय व्यवस्थाका लागि प्रमुख मुद्राका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।
सोभियत संघको पतनसँगै अमेरिकाले आफूलाई विश्वविजेता ठान्यो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता संरक्षणका लागि अमेरिकी गुट राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने वकालत अमेरिकाले गर्‍यो । तर, २०औँ शताब्दीमा अमेरिकी अपेक्षाविपरीत चीन उदीयमान शक्तिका रूपमा आयो । एक हिसाबले सोभियत युनियनको ठाउँ चीनले लियो । अहिलेको स्थितिमा आइपुग्दा चीन सबैभन्दा ठूलो विश्व शक्ति बन्ने बाटोमा छ ।
सन् १९७० को दशकलाई फर्किएर हेर्ने हो भने अमेरिकाले चीनको विकासमा ठूलो योगदान गरेकै हो । सो समयमा चीन र सोभियत संघबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन । यसर्थ, चीन र सोभियत संघबीचको टकरावलाई बढाउने नियतले अमेरिकाले चीनलार्इ सहयोग गरेको थियो । अहिले चीन प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाउँदा अमेरिकाले आफ्नो शत्रुको रूपमा चीनलाई हेर्नुले उसको नियत प्रमाणित भएको छ ।अहिले अमेरिकी राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता व्यक्तिमा राजनीतिक शक्ति आउनु विश्व साम्राज्यवादको परिणाम नै हो ।
अनि विश्वमा अमेरिकी पकड बनाइराख्न ट्रम्पले विरोधी तथा प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई कमजोर बनाउन आर्थिक प्रतिबन्धलाई बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसो त सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, इरान र रुसमाथि अमेरिकाले विभिन्न समयमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो । तर, अमेरिकाले जुन कारण देखाएर यस्ता देशमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएको छैन ।
वास्तवमा अमेरिकी प्रतिबन्ध स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत छ । अमेरिकी कदमकै कारण विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता विश्व वित्तीय संस्थामा समेत संकट निम्तिने स्थिति छ । यसरी, बहुराष्ट्रिय संस्थालाई कमजोर पार्ने, प्रतिस्पर्धीमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकी विश्व व्यवस्थाको विकल्प रोज्ने वेला आइसकेको छ ।
(लेखक एसिया–प्यासिफिक रिजनल रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष हुन्)। ग्लोबल चाइना टेलिभिजन नेटवर्क (सिजिटिएन) नयाँपत्रिकाले गरेकाे अनुवाद।